Fialan-tsasatra amin'ny fiaramanidina Freeware (3)
fanontaniana Fialan-tsasatra amin'ny fiaramanidina Freeware (3)
1 taona 2 andro lasa izay #945 by DRCW
Fialan-tsasatra amin'ny fiaramanidina Freeware (ampahany 3)
Ity ny lahatsoratra farany amin'ity lohahevitra ity (Avereno vakiana indray ny ampahany 1 sy 2)
Noho izany dia nanao ny KLM 737 bebe kokoa tahaka ny fiaramanidina fiaramanidina izahay saingy mbola misy zavatra azontsika atao ihany. Raha manaraka ny ampahany 1 &
2, dia nandefa ny 717-200 avy amin'ny tranonkala Rikooo.com ianao. Amin'ny alalan'ity fametrahana ity, dia nanampy avy hatrany ny FDSFX pop-
izay ahafahanao manana ekipa ao anaty baoritra amin'ny alàlan'ny fanovana eo amin'ny tontonana. Mazava ho azy raha mampiasa FS-Passenger ianao
dia mety ho diso hevitra izany indraindray mety misy fotoana izay tianao hanidina tsy misy FSP.
Aleo lazainareo fa mampiasa FSP foana ianao ary tsy mila mampiasa ny FDSFX pop-up ianao, afaka manitsy sy manova ny feo ho an'ny tsirairay
ny fifantenana ny olona amin'ny rakitra mozika na format hafa MP3. Vantany vao napetraka ny 717-200, dia napetraka ny haavo fototra
ny audiophile amin'ny ordinatera mainty FSX. Raha vantany vao misokatra ny ordinatera mainty dia ho hitanao ny rakitra mitondra ny marika "FDSFX". Eto dia
izay misy tahirin-tsarimihetsika mp3:
20_Taxi mankany Gate_Ann
Tsy ilaina ny milaza fa raha ampiasainao ity tontonana ity dia tsy tsara loatra ny kalitaon'ny feo. Azonao atao ny manadio ny rakitra voafaritra miaraka amin'ny MixPad
Multitrack Recording Software maimaim-poana sy azo amidy amin'ny: www.nch.com.au/mixpad/
Tsindrio ny "download free version eto" faritra.
Raiso ny rakitra tianao hanadiovana Ohatra: (18_On Approach_Ann) dia kopia ary avereno ao amin'ny Mixpad. Tsindrio ny vokany
Icon ary ampiasao ny Equalizer (Visual) rehefa milalao ny audiophile. Ampifanitsio ny toe-javatra izay ahazoanao ny feo tsara indrindra ary tsindrio
mihatra. Miezaha manatsara sy manapaka freq. mba hahitana feo tsara. Raha hitanao fa mandresy ny motera dia manandrana manapaka freq
eo anelanelan'ny 100 sy 250hz. Raha diso ny Highs dia manandrana manapaka ny freq amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 khz dia manatsara ny fifandraisana midika. Raha ny
Ny volanao dia ambany loatra ka afaka manatsara azy ianao amin'ny fipihana ny Icon Amplify ary hampitombo ny habetsa hatramin'ny 400%. Vita vantany vao vita
ao an-trano ary manondrana izany any amin'ny tranokala fanalahidy ao anaty varavarankely. Mivoaha avy ao amin'ny MixPad. Hanontaniana ianao raha te hamonjy "
select no "
Sokafy ny solosaina findainao ary hisy ny rakitra mitondra ny lohateny hoe "Tetikasa Default" Ity ny rakitra nosoratanao. Tariho mankany amin'ny anao
ny birao dia manavao azy io (18_On Approach_Ann). Azonao atao ny mamaky sy mametaka izany ao amin'ny ordinatera FDSFX ary rehefa
dia nisafidy ny hisafidy Copy and Replace. Efa nosoloanao ny lahatsary mahaleotena mahazatra ny horonantsary tamin'ny alàlan'ny fanatsarana vaovao anao
Azonao atao ny manolo ireo rakitra voalaza etsy ambony miaraka amin'ny MP3 tianao. Aleo lazaina fa te hisolo anao (01_Gate Ambience) miaraka amin'ny
rakitra mozika ao amin'ny tranokala MP3. Mitondrà dika mitovy amin'io rakitra mozika ao amin'ny biraonao ianao ary manaova anarana (01_Gate)
Ambiance) dia afeno ary apetaho ao amin'ny ordinatera FDFSX fototra izy ary sokafy ny kopia ary azerao rehefa aingam-panahy.
Fanamarihana: Ny fampiasa ny MixPad dia ahitana programa fandaharana iray maimaim-poana antsoina hoe NCH Suite. Miaraka amin'ity programa ity dia afaka mivadika ianao
Ny MP3 dia miditra amin'ny onjam-peo izay ahafahana manitsy sy manova rakitra feo .
Okay izao dia hanampy isika paompy sy taxi vitan'ny fiara ho an'ny KLM 737. Ity programa ity dia freeware fantatra amin'ny hoe
Groundhandling5 . Mandehana ao amin'ity tranonkala ity: flyawaysimulation.com/downloads/f...ing-gauges-
Vantany vao nalefa alohan'ny hamoahana azy dia mamorona rakitra ao amin'ny lahatahiry dokam-barotra ary manaova anarana hoe "Groundhandling5" ary sintony eo
ny biraonao. Esory ireo rakitra rehetra ao amin'ny downloadanao ao amin'ny folder Groundhandling5 noforoninao. Sokafy ny FSX anao ankehitriny
folder then Alefaso ary apetaho "Groundhandling5" ao amin'ny lahatahiry feo FSX anao. Tsy maintsy manao izany ianao indray mandeha.
Zarao izao ny antontan-taratasy KLM 737 avy amin'ny ordinatera SIMOBICS / Airplanes FSX. Locate the planes panorenana panandeo dia kopia ary apetaho ilay
RCB_Groundhandling5 Fandefasana kasinasa ao amin'ny ordinateran'ny KLM 737 (Ireo no lanjan'ny Groundhandling5)
Ampiasao ny RCB_Groundhandling5_Sound.dll amin'ny anaran'ny Panel Panel an'ny KLM 737 (ity rakitra ity dia miteny amin'ny FSX hampiasa ny feo
avy amin'ny ordinatera feo)
Misokatra farany ny rakitra README ary hahita ity fizarana manaraka ity ianao:
gauge04 = RCB_Groundhandling5! Breaks, 146,2,56,61
Sokafy ny file KLM Panel.cfg ary ny fizarana voalohany dia tokony hitovy amin'izany:
window01 = Switches
Window03 = Panelin'ny tavoahangy
Window04 = Panel eo ambony
Window05 = sidina SFX FlightDeck
Window06 = Fitantanana ny varavarana
Window12 = Tovana mivadika
Window13 = GPWS / IAS / AS / solika
Window15 = Wind Window
Window16 = SSI Backup
Window17 = Altimeter Backup
Window18 = Hery Backup
Eo ambanin'ny Window21 = karazana Radio Stack ao Window22 = Groundhandling5
Andeha horavina mandra-pahitanao.
Eo ambanin'ity fizarana ity dia aiza no hizaranao sy apetaka:
Hanova ny ** ho 22 ka hamaky azy [Window22] [/ b]
Alefaso ny // amin'ny fanombohan'ity laharana ity !!!
Mba hitsapana azy: Atombohy ny FSX ary raha vao tafiditra ao amin'ny KLM 737 ianao, dia tsindrio ny key alt (tokony hiseho eo an-tampon'ny
ny efijery) mifantenana ny / Instrument Panel / ary tsindrio amin'ny Groundhandling5. Ataovy azo antoka fa miasa izy ary farito amin'ny FSX.
Fiovana farany voafetra:
Miaraka amin'ireo fanovana nataontsika hatreto dia tsikaritrao fa tsy misy feo rehefa mifidy Fast Seatbelt & No Smoking
Io dia fivoahana mora ary namela izany aho tamin'ny farany satria tiako ny hahatakaranao ny olan'ny horonantsary voalohany. Ankehitriny dia nandrakotra izahay
Izany faritra izany no mamaha azy. Voalohany dia manana fiaramanidina ao amin'ny tahiry fototra FSX izay miasa fiara fitaterana ary tsy misy switch switches
miaraka amin'ny feon-kafeham-bolo mba hahafahantsika manokatra ny iray amin'ireo lisitry ny fiaramanidina. Indray mandeha any amin'ny FSX main folder / simobjects /
fiaramanidina. Hitady ny ordinatera Airbus_A321 ary sokafy izany.
Sokafy ny raki-peo ary ahitanao ny rakitra voamarina "feo" ary sokafy izany.
Horonan-taratasy ary afeno ary apetaho eo amin'ny taratasinao ity fizarana ity:
Ny fizarana ambony dia mamaritra ny FSX ho an'ny singulier tsirairay.
Ny fizarana ambany (filename = CabinAlert) dia miteny amin'ny FSX mba hisintona ny feo avy amin'ny ordinatera FSX fototra.
Sokafy ankehitriny ny ordinatera KLM ary misy koa ny rakitra marihitra "feo". Sokafy ny tahirim-peo ary alaivo sary ary apetaho ireo
ao amin'ny faran'ny lisitra. Mitazà foana toerana eo anelanelan'ny fizarana.
Tokony hanana fehezam-bolo ianao rehefa mampiasa ireny switch.
Manantena aho fa betsaka ny zavatra nianaranao teto. Raha vao mampihatra ireo tricks ianao dia ho tonga amin'ny fotoana iray rehefa maka freeware ianao
fiaramanidina ary manaisotra azy amin'ny biraonao, izany dia ny toetra faharoa hanaovana ireo fivoahana alohan'ny hametrahana izany ao amin'ny FSX. Ho afaka
mba hiteny hoe inona no ataonao amin'ny fijerena ny rakitra cfg ary ny ordinatera raha tsy hiteny ny ordinatera feo. Nolavinay io olana io
amin'ny ampahany 1.
Amin'ny hafatra ho avy aho hampianatra anao ny fomba fametrahana ny cockpit 2D amin'ny fiaramanidina izay tsy mampiditra azy ireo. Ahoana no manampy ny GPS / Autopilot /
Radio / ary ny hafa pop-up windows amin'ny fiaramanidina izay tsy manana azy, ary avy eo ny fomba fametrahana ny cockpit virto kely izay kely
Fotoana mamorona pejy: 0.283 segondra